Thwebula isithombe sesikhumba sakho - I-Global Allergy & Airways Patient Platform
Ikhaya>Thwebula isithombe izinguquko zesikhumba sakho
Thwebula isithombe izinguquko zesikhumba sakhoIpulatifomu Yesiguli Yomhlaba Wonke Nesifo Somoya2018-09-05T16:12:45+02:00
Esikhathini sefoni yeselula okufanele kwenzeke kalula.
Ezigulini eziningi, amasondo awenzeki nsuku zonke. Ngakho-ke udinga ukulindela ukuthi awukwazi ukukhombisa udokotela wakho, ukuthi isimo sesikhumba sakho ngesikhathi sokuqubuka sibukeka kanjani.
Lapho uthwebula izilonda, zinakekele ukuze zivele njengoba benza ngempela. Izimo zokukhanyisa ezinhle (ukukhanya kwelanga okukhanyayo, akukho ukukhanya, akukho izibani ze-neon), ibanga elanele (okungenani ama-30 cm), nesizinda esimnyama kuyasiza lapha.